Maqaal | HIGIL
Posted on Axad, Maajo 6, 2012 by Jidhidhico	• Faallo u dhaaf
Mar aan sii fogayn ayaan qoray in uu maansayahanku jabin karo qodobbo cayiman oo naxwaha sugan ka mid ah; tan waxa aan uga gol lahaa in aan aragtiyeeyo sida uu maansayahanku u jiido, oo u sii kobciyo, naxwaha afkiisa. Caddaynta runnimada aragtidan iyada ah ayaa ku xidhan hal tusaale ah, oo aan soo tebin doono. … Sii akhri →
Hawsha Gorfeeyayaasha Maansada
Posted on Axad, Luulyo 17, 2011 by Jidhidhico	• 13 Faallo
Hordhac Qofka maanso curinaya waxa uu adeegsanayaa af iyo ereyadiis; waxa uuna dhambaalkiisa u dawinayaa cid Allaala ciddii uu u garto inay maansadiisu khusayso. Marka, waa muhiim inuu qofkani adeegsado ereyo iyo balaaqo ku habboon hadafka maansadiisa. Haddii ay maansadiisu ku socoto mujtamac iyo dad, waxa uu qofkani maansadiisa gundhig uga dhigayaa dhambaal khuseeya mujtamacan … Sii akhri →